Dhimmoota shan dhiironni badaa hin haasofne fi maaliif yaaddessaa akka ta'an - BBC News Afaan Oromoo
Dhimmoota shan dhiironni badaa hin haasofne fi maaliif yaaddessaa akka ta'an
Garaagarummaa sakandiiwwan 40tiin addunyaarraa bakka tokkotti namni tokko of ajjeesa. Yeroo hedduu kan ofiin of ajjeesan dhiirota.
Kunis irra caalaan sababa rakkoo isaanii himatanii qarqaarsa hin gaafannefi. Ofii dhimmoonni dhiironni haasa'uu qaban maal fa'i?
Miidiyaa hawaasaa fi Dhugaa
Itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa fayyaa sammuu irratti miidhaa qabaachuu mala.
Qorannoon Yuunivarsitii Peenisilvaalniyaa akka mirkaneesseetti namni tokko hammuma miidiyaa hawaasaa tureen kophummaan itti dhagaahamaa deema. Dhiibbaan inni dhaqqabsiisuus kan sirreessuun danda'amu miti.
Yeroon 'Facebook' fayyadamuu daangeffamuuf jedhame
Dhibee waa dagachuu irraa akkamiin of eeguun danda'ama?
Jimaa qama'uun fayyaa sammu ni miidhaa?
"Yeroo miidiyaa hawaasaa irratti dabarsitan hir'isuun mukaa'uu ykn 'Depression' akkasumas miira kophummaa ni xiqqeessa" jedhu qorannicha kan barreessan saayikoloojist Meelisaa Haant.
Goodayyaa suuraa Miidiyaan hawaasaa miira dhugaa nama tokkoo ni haguuga ykn dhoksa
Garuu miidiyaan hawaasaa akkamiin nama miidhuu danda'a?
Yeroo baay'ee wanti miidiyaa hawaasaa irratti ta'u kan dhugaan lafarra jiru hin mul'isu jedhu pirofeesarri saayikoolojii Yuunivarsiitii Michigaan.
"Namoonni wayita gara miidiyaa hawaasaa seenan wantoota dhugaa lafa jiru irraa baay'ee fagoo ta'an argu. Ta'us dhugaa jireenya isaani fi kan miidiyaa hawaasaa wal bira qabanii madaaluu hin dhiisan, suun miira namootaa irratti dhiibbaa qaba" jedhu.
Qorannoo guddicha sagantaan Yaalii kophummaa BBC dhaaba 'Wellcome Collection' jedhamu waliin hojjeteen dargaggoonni umurii waggaa 16 hanga 24 yeroo mara warra kophummaan itti dhagaa'amu.
Qorannoon Yuunivarsitii Oksfoord bara 2017 baase akka mul'isutti kophummaan dhiirota irratti ni hammaata. Irraa dandamachuufis ni rakkatu.
Qorannoo kana kan hojjete Roobin Dunbar akka jedhutti hiriyummaan dhiirotni dubartoota waliin qaban bilbilaan sa'aatii dheeraa haasa'uu danda'uu irratti murtaa'a.
Kan dhiirota gidduu ammoo waliin waa gochuu - kubbaa taphachuu, mana dhugaatii waliin deemuu, waliin yeroo dabarsuu gaafata jedha.
Kophummaan sadarkaa hamaarra wayita gahu, qaamarraanis ta'e sammuurraan dhiibbaa fayyaa geesisuu danda'a.
Qorannoowwan kophummaan kallattiin dhibee waa dagachuufi dhukkuboota biroof akka nama saaxiluu danda'u agarsiisu.
Qorannoowwan hedduun akka mul'isanitti boo'ichi miira namaa qooddachuufi hariiroo hawaasummaa cimaa uumuuf gargaara.
Haa ta'u malee ilaalchi "dhiirri hin boo'u" jedhu kanaaf rakkoo ta'eera.
Dhiirota umuriin isaanii waggaa 18-24 gidduu jiran keessaa dhibbeentaan 55 boo'ichi dhiirummaa isaanii akka xiqqeessu yaadu kedha qorannoon UK keessatti taasifame tokko.
"Ijoollee dhiiraa akka miira isaanii hin ibsanne goone guddifna, sababi isaa miira ofii ibsachuun akka dadhabinaatti fudhatama" jedha dhaabbata Awustiraaliyaa dhimma kanarratti gorsa kennu kan hogganu Kaalmon Odirisool.
Qorannoon dhiyeenya UK keessatti taasifame akka himutti dhiironni haadha warraa isaanii caalaa galii argamsiisuu akka qaban yaadu. Isaan keessaa Olumidee Durojaaye tokko.
Goodayyaa suuraa Olumidee Durojaaye hojjetaa galii jiddugaleessaa qabu
"Abbaan koo halkanii guyyaa hojjetee, oliif gadi kaatee maatii keenya bulcha ture, akkas ta;uun hawwe" jedha. "Gahee 'dhiira' irraa eegamu sana baahachuuf maallaqi akka na barbaachisu yaaduun eegale."
Itti gaafatamummaan maallaqaa akkanaa jiraachuun fayyaa sammuu daran miidhuu danda'a. Carraa hojii dhabuun yaadni of ajjeesuu akka dabalu taasisa jedha qorannoon Bara 2015 qoratame.
Rakkoon guddaan ammoo wayita namoonni galii isaanii kan namoota kaanii waliin wal bira qabanii madaalan kan uumamu akka ta'e mul'isa.
Sagantaa TV biyya UK tokko irratti dorgomuun sadaffaa kan bahe Joosh, ergasii beekamtiin isaa akka dabale dubbata.
Achi booda waa'ee dhaabbii qaama isaa cinqamuu akka eegale hima.
Goodayyaa suuraa Reality TV shows have been criticised for triggering body image issues in young people
"Mana ispoortii ykn 'Gym' keessan jiraachaa ture jechuun ni danda'ama. Akkas ta'ees qaama kooti gammachuu argachuu hin dandeenye, al kudhan daawitii keessatti of ilaalaan oola."
"Wanti hamaan ammoo dargaggeessi dhaabbii qaamaa bareedaa qabu tokko gaaf agartu of jibbuu eegalta" jedha.
Jimaa qama'uun fayyaa sammuu ni miidhaa?